​10 qof oo ku geeriyooday baabuur ay jiireen ciidamada AMISOM
MUQDISHU, Somalia- Kolonyo kamid ah gaadiidka ciidamada AMISOM oo galinkii dambe ee maanta ka baxayay magaalada Muqdishu ayaa dusha ka maray baabuur ay saarnaayeen dad shacab ah duleedka caasumadda Somalia.
Inta la xaqiijiyay 10 qof ayaa geeriyootay 15 kale waxaa soo gaaray dhaawacyo qaybtood halis yihiin iyadoo iminka lagu dabiibayo goobo caafimaad oo ku yaalla Xamar.
Goob joogayaal ku sugnaa halka shilku ka dhacay ayaa GO, u sheegay in gaarigan dadka badan ku dhinteen uu noociisu ahaa Hoomeeb ama Bus, kayimid degmada Afgooyeen, kaasoo ay ku safrayeen dad shacab ah, balse dhacdadan ku qabsatay deegaanka lagu magacaabo Calamada.
Majirto tafaasiil dheeraad ah oo laga helayo shilkaasi, balse waxay qayb ka tahay dhacdooyin kala duwan oo ciidamada Midowga Africa inta badan ka gaystaan Koonfurta Somalia. Lama oga sababta Ciidanka AMISOM gaarigaasi u dar-dareen.
Dabayaaqadii sannadkii hore, ayay ahayd markii gaari noocaan oo kale ah AMISOM dab qabadsiisay isagoo kusii jeeday magaalada Muqdishu, waxaana ku dhintay dad shacab ah.
Ciidamada nabad ilaalinta u jooga Somalia, ayaa falalkan oo kale isaga difaaca inay ka shakiyeen gawaarida iyo dadka ay waxyeelleeyaan iyadoo aysan jirin tallaabo ay qaado dowladda Somalia.
Tan iyo markii ay soo galeen AMISOM dalka Somalia, waxaa dhacay kiisas badan oo ka dhan ah bini-aadanimada.
​DEG DEG: Qarax Gaari oo goor dhaw ka dhacay Muqdishu
Soomaliya 10.10.2016. 13:39
MUQDISHU, Somalia- Qarax culus oo dhowr Askari ay ku dhaawacmeen, ayaa maanta oo Isniin ah Duhurkii ka dhacay magaalada Muqdushu, ee caasimada dalka Soomaaliya.
Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane, ayaa warbaahinta u xaqiijiyay qaraxa, ...
Muqdishu: Qarax lala beegsadey ciidamada nabad ilaalinta Somalia AMISOM
Soomaliya 07.10.2016. 12:08
​Dad ku dhintay Duqayn ay gaysteen ciidamada AMISOM [Dhagayso]
Soomaliya 05.10.2016. 11:30
Afar qof oo ku dhintay Baabuur isku dhacday Garowe
Puntland 01.05.2017. 11:26
AMISOM oo ciidamdeeda kala baxeysa dalka Somalia sanadka 2018
Soomaliya 25.04.2017. 08:25
Faahfaahin qorshaha dib loogu dhisayo ciidamada Somalia [ AKHRI]
Soomaliya 19.04.2017. 09:41
Somalia: AMISOM oo shan qof ku dishay Baraawe
Soomaliya 06.04.2017. 10:49
Taliyihii Guutada 6-aad ee ciidanka Somalia oo qarax lagu dilay [DHAGEYSO]
Soomaliya 12.02.2017. 14:29